Dhalaanka keli socodka ah ee dhalasha qaata oo aan loo keeni doonin waalidiintoonta | Somaliska
Dhalaanka keli socodka ah ee dalka Iswiidhan yimid islamarkaasina qaatay dhalashada dalka, ayaan suuragal u noqon doonin in ay dalbadaan waalidoontooda. Arrintan ayaa sabab u ah in sharciga dalka dhagiyo in dadyowga loo keenayo eheladooda ay yihiin ajanabi heeysta sharciga deganaanshaha oo qura.
Dooda sheekadan ayaa timid markii maxkamadda laanta socdaalka ay riday ridey go’aan maxkamadeed oo arrintan salka ku heeysa, taas oo ah in dhalaanka keli socodka ah ee qaata aanu laheyn xaq ah in loo keeno waalidiinta ka maqan si ay isula midoobaan.
“Go’aanka ceeynkan ah, waa mid kalifaya in keliyentigeeyga/ macaamisheeyda kula taliyo ineeysan dhalashada dalkaan codsan si arrintaan oo kale aaneey ugu dhicin. Sharcigan waa mid si toos ah uga hor imaanayaa xuquuqda aadanaha iyo xeerarka u degsan Yurub”, ayey tiri Karin Gyllenring oo ah qareen ku xeel dheer sharciyada qaxootiga iyo magangalyo doonka.
Sanadku markuu ahaa 1997-dii ayey laanta socdaalka soo saarrtay sharci dhigaya in dhalinyaradda dalbanaya waalidooka ay ahaadaan kuwo aan laheyn xaas ay ka soo tageen ama ku mehersan islamarkaasina yihiin ajaanib. Waana qodobka ay laanta u cuskatay kiix amuurtan la xirriita oo ay xukun ku riday.
“Ma muuqado dariiq noo furan oo aan ka aheyn in sharuucda dalka loogu hogaansamo sida uu dhigayo” sidaa waxaa tiri Ingela Fridström oo ah ku xigeenka maxkamadda laanta socdaalka, ridayna xukunka maxkamadeed ee kiiskan iyadoo u warameeysay laanta socdaalka Iswiidhan.
Dhinaca kale idaacadda raadiyo Iswiidhan oo aannu warkan ka soo xiganay ayaa qeybteeda wararka ee Ekot, amuurtan indhaha ku heeysay ayaa la kulantay mid ka mid ah dhalaanka keli socodka ah oo 18 jir ah, kaas oo lugu magacaabo Axmed Al Cabaasi ayaa sheegay in ogaal la’aan ka heeysay sharuucda dhalashada sheegay inuusan ku dag dageen codsigeeda. Axmed Alcabaasi waxaa uu ku nool yahay degmadda Bodafors ee gobolka Småland.
Somaliska.com/Ekot raadiyo Iswiidhan
Asc dadka yimi wadanka 2012 haystana sharciga geneva ahna 26 år isaguna isku filan oo aan caydh qaadan ma keeni karaa waalidkiis oo xanuusan sweden